Red's Rose Dream: November 2007
Posted by Red's Rose Dream at 17:16
Good Health ဂျာနယ် အမှတ်(၃၆) တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဒေါက်တာရဲနိုင်၏ "အသည်းနဲ့ တည်အောင်နေပါ" ဆောင်းပါး ကို ပြန်ကူးထားတာပါ။ မအိပ်မနေ စာတွေရိုက်ပြီး တင်နေတက်တဲ့ ဘလောဒ့်ဂါများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်ကူးထားတာပါ။ သိမ်းထားချင်တာကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းဆိုတာ ခန္ဒ္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်း(သို့) ဓာတုဗေဒစက်ရုံကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဇိဝယန္ဒရားကြီး ပုံမှန်လည်ပတ် ဖို့အတွက် အစာအဟာရကို ကုန်ကြမ်းပြုပြီး လိုအပ်တဲ့ ဇီဝပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်၊ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို ရောက်လာတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ(ဥပမာ-အရက်နဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ)ကိုလည်း ချေဖျက်စွန့် ထုတ်ပေးနေပါတယ်။
ဒီတာဝန်ကို အသည်းဟာ အခြားအင်္ဂါတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ၂၄ နာရီထမ်းဆောင်ရာမှာ ဇီဝနာရီရဲ့ အချိန်ဇယား အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူတွေဟာ ဒီအချိန်ဇယားနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်စားသောက်အိပ်စက်တက်ရင် အသည်းလည်းကျန်းမာမယ်။ လူလည်း အသက်ရှည်မယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အချိန်ဇယားနဲ့ အသည်းရဲ့အချိန်ဇယား အံမ၀င်ခွင်မကျဖြစ်နေတော့ အသည်းလည်း ပျက်စီးလွယ်ပြီး လူလည်းကျန်မာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အသည်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ချိန်ကိုက်ညီ သဟဇာတဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်တက်ဖို့ အသည်းရဲ့အချိန် ဇယားကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ည ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီ
ဒီအချိန်မှာ အသည်းဟာ လင့်ကျိတ်(Lymph nodes)ကတဆင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်နဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ ကို ချေဖျက်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အနားယူရမယ့် အချိန်ပါ။ တေးဂီတ၊ တီဗွီ၊ ဗီဒီယိုကြည့် အပန်းဖြေရမယ့် အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဇောကပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေ၊ နေ့မှာ စီးပွားရေးလုပ်ပြီး ညကျမှ အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ ဒီအချိန်အထိ အလုပ်လုပ်တုန်းဆိုရင်တော့ အသည်းရဲ့ အချိန်ဇယားနဲ့ လွဲချော်နေပြီဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ည ၁၁ နာရီမှ သန်းခေါင်ကျော် ၁ နာရီ
အသည်းဟာ သည်းခြေအိတ်နဲ့အတူ အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားနေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ လူဟာလည်း အိပ်စက်အနားယူရမယ့် အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်အထိ မအိပ်သေးဘဲ ဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့ ပျော်ပါး နေရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
နံနက် ၃ နာရီမှ ၅ နာရီ
အသည်းဟာ အဆုတ်မှ တဆင့် အဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားနေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန် ချောင်းဆိုးကြ တာဟာ သလိပ်နဲ့အတူ အဆိပ်အတောက်တွေကို စွန့်ထုတ်နေတာမို့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေ မသောက် သင့်ဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
နံနက် ၅ နာရီမှ ၇ နာရီ
အသည်းဟာ အူမကြီးမှတဆင့် အဆိပ်အတောက်တွေကို စွန့်ထုတ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်သာတက်၊ ဆီး၊ ၀မ်းသွားတာအကျင့်ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အိမ်သာမတက်၊ မစွန့်ထုတ်ဖြစ်သေးရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ (မြန်မာလို အပုပ်အစပ်တွေ)ကို သိမ်းဆည်းသိုလှောင်ထားသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
နံနက် ရ နာရီမှ ၉ နာရီ
အူသိမ်ထဲက အစာအဟာရတွေကို အသည်းက စုပ်ယူနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အူသိမ်ထဲမှာ အစာသစ် ရှိနေရမှာဖြစ်လို့ နံနက်ခင်းစာကို စားထားပြီးဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။ မကျန်းမာတဲ့သူဆိုရင် နံနက် ၆ နာရီခွဲ ကတည်းကစားထားရမယ့်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ ၉နာရီကျော်မှ နံနက်ခင်းစာစားရင်း လည်း မိမိအကျင့်နဲ့ ဇိဝနာရီ အချိန်ဇယားက လွဲချော်နေပြီးလို့ မှတ်ယူရပါမယ်။
ဒီတော့ အသည်းကို ပျက်စီးစေမယ့် အမူအကျင့်တွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင်-
-ညဉ့်နက်မိုးချုပ်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်တာ၊ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ထိ မအိပ်သေးတဲ့အကျင့်ဟာ မကောင်းပါဘူး။
-သန်းခေါင်ကျော်အချိန်မှ နံနက် ၄ နာရီ အတွင်းမှာ ရိုးတွင်းခြင်ဆီက သွေးအသစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ အချိန်မို့ ဒီအချိန်ထိ မအိမ်သေးရင် ပိုဆိုးပါတယ်။
-နံနက်စောစောမထဘဲ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ အိမ်သာစောစော မတက်ဖြစ်တာ၊ နံနက်ခင်းအစာကို မစားဖြစ်တက်ကြတာ တွေကလည်း ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ပါတယ်။
-အစားကြူးတာ၊ အရက်၊ ဆေးလိပ်နဲ့ မလိုဘဲ ဆေးဝါးနဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ၊ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းအနံအရသာ ပိုကောင်းအောင်(ဥပမာ- အချိုမှုန့်) ပါတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အသည်းကို တာဝန်ပို၊ ၀န်ပိစေပါတယ်။
-မသန့်တဲ့ဆီနဲ့ ကြော်ချက်တဲ့ အစားအစာတွေဟာ အသည်းနဲ့မတည့်ပါဘူး။(သံလွင်ဆီဟာ အသည်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလို့ ပြောကြပါတယ်။) ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အစိမ်းသန့်သန့်စား၊ ကြော်စားမယ်ဆိုရင်လည်း အကျက်မလွန်စေနဲ့။ ကြော်ထားတဲ့ အသီးအရွက်တွေကို တခါတည်းနဲ့ အပြတ်စား၊ ကျန်တာကို သိမ်းပြီးနောက်မှ တခါပြန်စားတာလည်း ကျန်းမာရေနဲ့ မသင့်တော်ဘူးလို့ မှတ်သားထားရပါတယ်။ ကိုယ့်အသည်းနဲ့ကိုယ် တည့်အောင်နေတက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဘလောဒ့်ဂါအားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Labels: ကျန်းမာရေး, အစားအသောက်
Posted by Red's Rose Dream at 10:55
ဖြူ၊ နီ၊ ၀ါ
မိုးချစ်သူတက်ထားလို့၊ အိတ်ထဲရှိတာအကုန်ထုတ်ဆိုလို့။ ကဲထုတ်လိုက်ပြီ။ ကျွန်မအိတ်ထဲမှာ ကျွန်မအမြဲထည့်တက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့။ အဲ ကျွန်မအိတ်ကတော့ အရူးလွယ်အိတ်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူပါရဲ့။ အိတ်ကြီးကြီးတွေကိုသာကျွန်မကြိုက်တက်သလို။ အိတ်သေးသေးလေးတွေလည်း ချစ်လို့၊ ၀ယ်ပြီးအိတ် ကြီးကြီးထဲကိုထည့်ပြီးဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အိတ်ကြီးကြီးထဲမှာတော့...
၁။ ရေတွေထည့်ဖို့ ရေထည့်တဲ့အိတ်။
၂။ ရာသီဥတုဒတ်ကကာကွယ်ရအောင် ထီတစ်ချောင်းတော့ အမြဲဆောင်တက်ပါ၏။
၃။ ဂျူး ဆိုတဲ့ရာပန်းဆီတစ်ဗူး။
၄။ အဘထလို ဆေးမြစ်တွေပါတဲ့။ ရှူဗူးတစ်ဗူး။
၅။ အကြွေစေ့တွေထည့်ဖို့ ပိုက်ဆံအိတ်သေးသေးလေးနောက်တစ်လုံး။
၆။ အိတ်ကြီးကြီးရဲ့ ဇစ်ထဲမှာကတော့၊ စတစ်ကာဓါတ်ပုံတွေ၊ ပစ်စပို့ဓါတ်ပုံတွေထည့်ထားတဲ့ ပလပ်စတစ် အိတ်
၇။ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတစ်တောင့်။ နှုတ်ခမ်းဆေးဆိုးတာ မကြိုက်ပေမယ့် ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် ဆိုးရအောင် လိမ္မော်ရောင်(သို့) ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ (သို့) အညိုဖျော့ဖျော့ တစ်ချောင်း အမြဲဆောင်ထားတက်ပါတယ်။
၈။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးရင် ကြည့်ဖို့မှန်တစ်ချပ်ရှိပါတယ်။
၉။ အမြဲတမ်း ရှုပ်နေတက်တဲ့ဆံပင်တွေအတွက် ခေါင်းဖီးသေးသေးလေး တစ်ချောင်။
၁၀။ Memory Stick တစ်ခု။
၁၁။ ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ တိုလီမုတ်စရေးရအောင် စာအုပ်သေးသေးတစ်အုပ်။
၁၂။ ကော်ဗူးတစ်ဗူး။ သုပ်ချင်တာတွေသုပ်လို့ရအောင်။
၁၃။ ပစ်စပို့တစ်ခု(ရန်ကုန်တုန်းကတော့ ရှိသမျှကျောင်းသားကဒ်တွေ အကုန်ထည့်ထားတက်တယ်။ လက်နက်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့။)
၁၄။ ရှုပ်ပွတက်တဲ့ ဆံပင်တွေကို ချည်နှောင်ဖို့ ခေါင်းစည်းကြိုးအနက်ရောင် သေးသေးလေး၁၀ခုလောက်နဲ့၊
ခေါင်းစည်းကြိုးအကြီး ၁ ခုနဲ့၊ ကလစ်တချို့။
၁၅။ ရောင်စုံဘောပင်။ Correction Pen။ ဘောပင်။ ခဲတံ။ ခဲဖျက်။ ခဲတံချွန်ဖို့ ဓါးတစ်ချာင်း။ ခဲချွန်စက်တစ်ခု။ ပေတံသေးသေးတစ်ချောင်းလည်း ပါသေးတယ်။
၁၆။ အပ်ချိပ်သေးသေးလေးတွေလည်း ပါသေးတယ်။ လိုအပ်ရင်သုံးဖို့။
၁၇။ အသံအမြဲပိတ်ထားတက်လို့ Miss Call အမြဲတမ်းပေါ်တဲ့ နို့ဆီခွက်တစ်လုံး။
၁၈။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုင်ရမှာ ပျင်းတဲ့ ကျွန်မအမေရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ရယ်။ စာကြည့်မျက်မှန်ရယ်၊ သူ့ရဲ့နို့ဆီခွက်ရယ်။
၁၉။ ဗိုက်အောင်ရင်သောက်ဖို့ Digene နဲ့ Spasmo ။ ပါရာနဲ့ ဘာမီတွန် ။
၂၀။ လျှောက်ခြစ်ထားတဲ့ ပြေစာစာရွက်အဟောင်းတွေ။
၂၁။ ပဲများရအောင် ဆောင်ထားတက်တဲ့ နားကတ်တွဲလောင်းတွေထည်ထားတက်တဲ့ ဗူးတစ်ဗူး။
မပါ မဖြစ်ကတော့ ခြေဦးတည့်ရာလျှောက်သွားတက်တဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံရယ်။ တွေ့ကရာလျှောက်စား တက် တဲ့ ပါးစပ်တစ်ပေါက်ရယ်ပါ။ ကဲ အားလုံးအကုန်ဘဲ။ အပြင်သွားရင် အဲ့ဒီအိတ်တစ် လုံး ဆွဲပြီးထွက်လိုက်ရင် ဘာမှ မလိုသလောက်ဖြစ်သွားပြီ။
Posted by Red's Rose Dream at 15:04
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လင့်ပေးလို့ဝင်ကြည့်ပြီး သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်တာ ပျော်စရာကောင်းလို့ တင်းထားလိုက်တာ။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်လို့။
Posted by Red's Rose Dream at 16:20
ကျွန်မ ယုဇနပန်းပင်အကြောင်းရေးတုန်းက မီးလေးလား၊ နှင်းပွင့်လားမသိ ယုဇနပန်းမမြင်ဖူးလို့ ဆိုပြီးဆီဗုံးထဲမှာ လာအော်ဖူးလို့။ တနေ့ကမြို့ထဲသွားရင်း ယုဇနပန်းပင်တွေလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးယူ
လာခဲ့တယ် အခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တခြားဓါတ်ပုံလေးတွေလည်း ဒီမှာစုပြီးတင်လိုက်တယ်။ နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ် အသစ်အခုမလုပ်ချင်တော့လို့။ အပျင်းကြီးတာခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။
ဒါလေးက Sandakan မြေပုံလေး။
Memorial Stone at POW Camp. သုံးနိုင်ငံကိုယ်စားပြု(နေကြာပန်း၊ နှင်းဆီပန်း၊ ခေါင်းလားပန်း။)
POW Camp မှာရှိတဲ့ မြေတူးတဲ့စက်ကြီးပါ။
တောင်ပေါ်စခန်ကနေ Kinabalu တောင်ကိုရိုက်ထားတာပါ။
Kinabalu တောင်ပုံပါ။ (Professional တွေရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံ)
Orangutan ဆိုတာသူပါဘဲ။ လှတယ်ဟုတ်?
ကဲပြီးသလောက်လေးတင်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ထပ်ဖြည့်ပြီးရင် တင်ထားလိုက်ပါဦးမယ်။
အခုတလော ဘလောဒ့်စွဲမစွဲစမ်းတဲ့ ဟာလေး ကိုစိုးထက် ကစတယ်ထင်ပါရဲ့ ဘလောဒ့်လောကမှာ သူများတွေစမ်းတာတွေ့လို့ ကျွန်မလည်း သွားရောက်စမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မဘလောဒ့်ဘယ်လောက် စွဲနေသလဲကို သူငယ်ချင်းများကို ပြာပြချင်လို့ပါ။
ကျွန်မဒီလောက် ဘလောဒ့် စွဲနေပါတယ်။
ဒီလောက် Coffee စွဲနေပါတယ်။
I am 44% Addicted to Coffee